မိုးလင်းခွင့်​ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » မိုးလင်းခွင့်​	17
Posted by naywoon ni on Mar 9, 2015 in Poetry | 17 comments
ဂျူတီ လဲတဲ့ ကင်းသမားလို
အ​ပေါက်​ ဗလပွနဲ့ သူ့အ​မှောင်​စကိုဖြန့်​ခင်း အဲ့ဒိညက လကို အ​ဖော်​​ခေါ်မလာပါဘူး ။
(ညရဲ့ သဘာဝကို လ, ကဖျက်​ဆီးလို့တဲ့​လေ )
လ, ကလည်း လ, ပဲ
သူက ​လောက ကို အလင်းဓာတ်​​ပေး​နေတာကိုး ။
ည ဟာ လျှပ်​စစ်​မီးကိုလည်း မကြည်​ဖြူဘူး
ခုလုပ်​တိုက်​လဲရင်​ သူသိပ်​ပျော်​တယ်​ ။
​လောက ကို အ​မှောင်​ချထားပြီး
ပြီး​တော့ ည ဟာ
သူ့အ​ပေါင်းပါ​တွေ မ​တော်​ မတရား လုပ်​တာ
​လောက ကြီးကမြင်​မှာစိုးလို့​တဲ့လေ ။
အဲ့ဒိလိုနဲ့ပဲ ည ဟာ
ကမ္ဘာကြီးရဲ့ သက်​တမ်းထက်​၀က်​ခွဲ​ဝေယူ​နေရတာ မ​ကျေနပ်​​တော့ဘူး ။
သူပြန်​ရမဲ့ အချိန်​ထက်​​နောက်​ကျပြီးမှ ပြန်​​လေ့ရှိလာတယ်​ ။
သဘာဝ တရားက​တော့ ​နေ့ပြီးမှည
တစ်​လှည့်​စီ ခွဲတမ်းချ​ပေး​နေတုန်းမှာပဲ ညက ညစ်​ပတ်​ပြီး နှစ်​​ပေါင်းငါးဆယ်​​လောက်​
ည, က ခိုးယူလိုက်​ကို​တော့
သဘာဝတရားကြီး မသိ်​​သေးဘူးနဲ့တူရဲ့ ။
မိုးလင်းခွင့်​ ​ပေးလိမ့်​မယ်​နဲ့တူပါရဲ့ ။။
Mr. MarGa says: ​ရောင်​နီပျို့​နေပါပြီ​ဗျ
ကြာ​တော့မယ်​ မထင်​ပါဘု Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: ညရဲ့ သဘာဝကို လ က ဖျက်ဆီးလား…
မှောင်မိုက်ခြင်း သင်္ကေတမှာ…အလင်းရောင်ပျပျတောင် မပါဘူး…
ကြယ်ရောင် မမှိန်တမှိန်တောင် ညက စိတ်ရှုပ်..
သူ အိပ်ပုပ်ကြီးနေတာကို အနှောင့်ယှက် ဖြစ်သတဲ့…။
သဘာဝတရားဆိုတာ … တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်
လက်တွေ မြဲမြဲတွဲကြစို့ပါ…။ မျှော်လင့်နေကြသူ…ကိုယ်စီအတွက်…
နှစ် ငါးဆယ်အလွန် အလင်းရောင်ဟာ…
(မတောက်တခေါက်လေးနဲ့ တတ်ယောင်ကား ၀င်လုပ်ပါသည်….၊ ရွာထဲက ကဗျာဆရာများ စိတ်ညစ်ကုန်ကြရင် ခွေးလွှတ်ပါညှော်..)
(မှတ်ချက်။ ။ အလင်းရောင် = သာမီးကြိုက်သော မော်ဒယ်ကောင်လေးခပ်ချောချောကို ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ…)
ခင်ဇော် says: အာ့ တော့ နည်းနည်းများသွားပြီ။
အလင်းရောင်ရဲ့ ပိုင်ရှင် မမဂျီး အားဂျီး စိတ်ဆိုးဒယ်။
naywoon ni says: “အလင်း​ရောင်​ ” ဆိုတာ ​လေးဖြူ သီချင်းပါ ။ ဘယ်​နဲ့ ​မော်​ဒယ်​ ​ရှော​ရှော​လေး ဖြစ်​သွားရသလဲ ¿ ​ကောင်းကင်​ပြားရဲ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: ဆြာနေ
Update တဲ့ မချွိတောင် သိတယ်
Google မယ် အလင်းရောင်လို့ ရိုက်ထည့်ပြီး Image ခေါ်ကျိ
ကောင်လေးရှောရှောမယ်။ ပေါ်လာရင် အာ့လေး အာ့လေး
မြစပဲရိုး says: Google မယ် အလင်းရောင်လို့ ရိုက်ထည့်ပြီး Image ခေါ်ကျိ
ကောင်လေးရှောရှော လေး ပေါ် လာမယ် ဆိုလို့ ရိုက် ပြီး ရှာလိုက် တာ။
အလိုလေး ရှော လိုက်တာ။
သူကြီး မင်း ကူ ပါ။ ပေါ်လာတဲ့ ပုံ ကို ပို့ပေးမယ်။
အဲပုံ ကို ပြောတာ တော့ ဝုတ်လောက်ဘူး ထင်ရဲ့။
အဘနီ စောဒီး နော်။
ညမှာ အလင်းရောင် ဝင်လာပြီး ဇာတ်လမ်းရှုပ်သွားတာ ကို။ lol:-)))
ခင်ဇော် says: အာ. လေးး ကို
သိပ်ချစ်တယ် အရမ်းး မုန်းတယ် အမ်တီဗီမှာ မြင်ပြီးး ကြိုက်ရာက
နောက်မှ သိရတာက သူက …
Mr. MarGa says: ထုံးစံအတိုင်း ဖြစ်သွားပြီမလား
ခင်ဇော် says: အင်းးးပါဆို!!!
Kaung Kin Pyar says: အရီး
Google မယ် Web ခေါ်လိုက်ရင်တောင် အပေါ်ဆုံးမှာ ဒင်းပုံတွေ တန်းစီပေါ်လာတာကို….
ကွန်မန့်ထဲ ပုံဘယ်လိုထည့်တယ် ကောင်းကင်ပြာမသိလို့…
အရီးအတွက် အလင်းရောင်ဆိုပြီး…ပိုစ့်တစ်ပုဒ် တင်လိုက်ရမားဟင်….
ခင်ဇော် says: တင်လိုက်။
အရီးပုံကိုမမြင်ပဲ ဝင်ပြောမိတာ တလွဲဂျီး
Kaung Kin Pyar says: အလင်းရောင်က နောက်မှ သိရတာက ဘာဖြစ်သွားပြီလဲငင်….မချွိ…
တွမ်လေးဘက် ပြန်လှည့်သင့်ရင် ပြန်လှည့်ထားမှ….
kai says: အလင်းဆိုတာကို.. စွမ်အင်တခုလို့သိရင်.. အမှောင်ကိုလည်း စွမ်းအင်အဖြစ်လက်ခံသင့်သပေါ့..။
သာမန်ကြည့်ရင်.. မှောင်နေချိန်မီးထွန်းလိုက်ရင်.. အမှောင်ပျောက်.. အလင်းရောက်သမို့.. အလင်းစွမ်းအင်ဟာ.. အမှောင်ကိုခွင်းနိုင်တယ်လို့.. ရှေးလူကြီးတွေသိထားပေးမယ့်…
အမှောင်ဟာ.. အလင်းထက်စွမ်းပြီး.. စကြ၀ဌာကြီးကို ဖန်ဆင်းသူစစ်စစ်တဲ့လေ..။
Dark Energy တဲ့..။
ဘယ်လောက်လင်းလင်း.. အလင်းထွက်ရာမူရင်းပျောက်တာနဲ့.. အမှောင်က အလိုလိုလွှမ်းယူသိမ်းပိုက်လိုက်တာပဲ..။ =
In physical cosmology and astronomy, dark energy is an unknown form of energy which permeates all of space and tends to accelerate the expansion of the universe.
ခင်ဇော် says: We can easily forgiveachild who is afraid of the dark;
Alinsett@Maung Thura says: အဘနီ အခုတလောာာာ
စကားလုံးင်္တွေနဲ့ အဲ့အချင်းအရာတွေကို ဖော်ညွှန်းပြသနေမိတာကိုက
ကဗျာသမားတွေရဲ့ ချစ်သော ကျိန်စာပါ
naywoon ni says: အလက်​ဆင်းဒါး ​ရေ ဗမာပြည်​မှာ ကဗျာ ဆရာ ဖြစ်​ရတာ ၀ဋ်​နာကံနာတဲ့ ( ဆရာ ​အောင့်​ချိမ့်​လား ​ပြောဖူးတယ်​ ) ဟိုး မိုး​ဝေ​ခေတ်​က ဆရာ​မောင်​​လေး​အောင်​က​တော့ ဗမာပြည်​မှာ ​ခွေး​လေ ​ခွေးလွင့်​​တွေပြီးရင်​ ကဗျာဆရာ ဆိုတဲ့ သူအ​ပေါဆုံးတဲ့ ။ ​နောက်​ဆရာ တစ်​​ယောက်​က​တော့ ခု မြင်​​တွေ့​နေရတဲ့ ကဗျာ​တွေထဲ မှာ “ကဗျာ အတု” ​တွေ များ​နေသတဲ့ ကိုယ်​လိုရာ ကိုယ်​ဆွဲယူသုံးနိုင်​​အောင်​လို့ပါ ။